ဝက်ခြံဆန့်ကျင်ငါးခုကိုသဘာဝကုစား - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ Sant • လှပမှု • ကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေး • သဘာဝကကုစား • စောင့်ရှောက်မှု ဝက်ခြံဆန့်ကျင် "ငါးကသဘာဝကုစား
အဆိုပါအသေးစားခလုတ်ကြီးမားထက်မပိုမှတပါး, ငါတို့အရေပြားပေါ်မှာကြိုဆိုပါတယ်ကြသည်မဟုတ်။ ထိထိရောက်ရောက်ဝက်ခြံဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့, စက်မှုထုတ်ကုန်သေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေပြားအရှိဆုံးလေးစားမှုမရှိကြပေ။ ဤတွင်ငါးသဘာဝကကုစားဖြစ်ကြသည်။
1 ။ ခရမ်းချဉ်သီးသို့မဟုတ်သံပုရာ
ခရမ်းချဉ်သီးဓါတ်တိုးဒါပေမယ့်လည်းများ၏ခလုတ်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲထဲမှာထိတ်လန့်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ဝက်ခြံပုန်းများ ကြောင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်တော်တို့ကို disfigure - သူတို့ကနှာခေါင်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နဖူးအလယ်၌နေရာချကြသည်အထူးသဖြင့်အခါ။ ဒီစာရွက်များအတွက်ရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါသည်: ချပ်သို့ခရမ်းချဉ်သီး (ဖြစ်နိုင်ရင်အော်ဂဲနစ်) ဖြတ်နှင့်သင့်မျက်နှာပေါ်ဤအကြောင်းလျှောက်ထား နှစ်ဆယ်မိနစ်။ ပူနွေးတဲ့ရေနဲ့ဆေးလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့အသားအရေကျန်းမာနှင့်သန့်ရှင်းပါ!
သင့်ရဲ့အသားအရေလည်းအထိခိုက်မခံမဖြစ်လျှင်, သံပုရာအဘို့အရွေးချယ်။ ဒါဟာသန့်ရှင်းရေးနှင့်တစ်ဦး antibacterial အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ တစ်ဝါဂွမ်း swab အသုံးပြုခြင်းဆက်ဆံဖို့ဒေသများအပေါ်အနည်းငယ်ကျဆင်းလာ ထား. , လောလောလတ်လတ်ညှစ်သံပုရာဖျော်ရည်၌နှစ်ပြီးသော။ ဒါဟာနည်းနည်း tingles? ဒါဟာပုံမှန်ပါပဲ။ မိနစ်အနည်းငယ်ထို့နောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေနှင့်သုတ်ရပ်ကြကုန်အံ့။
2 ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီများကြောင့်
သည်အခြားထိရောက်သောနှင့်သဘာဖြေရှင်းချက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီများနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏ဘက်မှာရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဟင်းရွက်ဆီရောထွေး jojoba ရေနံ, အနက်ရောင်ဇီသို့မဟုတ် hazelnuts,မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံနှစ်ခုပေါက် လက်ဖက်ရည်သစ်ပင် နှင့်ဝက်ခြံပေါ်မှာသက်ဆိုင်ပါသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်, သံပုရာမြက်သို့မဟုတ်လာဗင်ဒါ လည်းအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ Alternate သူတို့ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။
3 ။ Apple က cider ရှလကာရည်
ကျနော်တို့မကြာခဏစကားပြော cider ရှလကာရည် အဖွား၏သဘာဝအလျောက်ကုစားသို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်နည်းများ၌တည်၏။ ပုံမှန်ကုသမှုဧရိယာဆေးကြောတစ်ခုစံပြထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ဝါဂွမ်းသို့မဟုတ်ဤရှာလကာရည်စိမ်နေတဲ့ compress နှင့်အတူ, ဝက်ခြံအားဖြင့်ခလုတ်ပေါ်အနည်းငယ်ကျဆင်းလာခြင်းသို့မဟုတ်ထိခိုက်နစ်နာဧရိယာ (s) ကိုထားတော်မူ၏။ ကထိုင်ပြီးတော့ပူနွေးတဲ့ရေနှင့်သုတ်ကြပါစို့။
အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကြောင်းလိမ့်မည်စက်မှုလုပ်ငန်းကနေလျှော့ချသို့မဟုတ်လုံးဝထုတ်ကုန် (gels, မျက်နှာဖုံးများအပေါင်းတို့နှင့်တကွအမျိုးမျိုးလိမ်းဆေး) ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည် degreasing, ချွတ်ပြီး, သင့်အသားအရေလမ်းလည်းအကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမည် ကာကွယ် hydrolipidic ရုပ်ရှင်ကမဆုံးရှုံးဖို့။
4 ။ စောင့်ရှောက်မှုအခြေပြုတစ်ဦးကအစိမ်းရောင်ရွှံ့
အစိမ်းရောင်ရွှံ့အမှုန့်, နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရဒါမှမဟုတ်ဂန္ချိုမြိန်နှင့်သဘာဝဆေးပညာများထဲမှသင့်ရဲ့ pharmacopoeia အတွက်နေရာမှရှိပါတယ်သုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်။ သင်ရွှံ့ထူးခြှနျအမှုန့်ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင်, (သစ်သားဇွန်းနဲ့စွန်ခံမဟုတ်သံမဏိနှင့်အတူ, ဒီအရေးကြီးပါတယ်) ရေနှင့်အတူပြီးတော့ရောမွှေပါ။အဆိုပါကိုက်ညီမှုအလုံအလောက်ချောမွေ့နှင့်ငါးပိဖြစ်တဲ့အခါ, ခလုတ်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်ပူနွေးသောရေနှင့်အတူလက်မဆေးခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပစ် (ရွှံ့ဒါကိုတော့နှင့်တောက်ပဖြစ်လာ) ကိုရွှံ့လုံးဝခြောက်သွေ့သည်အထိမတ်တပ်ရပ်ကြကုန်အံ့။ အဆိုပါအပေါက်သည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ခလုတ်, ညှစ်များမှာအလွန်မကြာမီပျောက်ကွယ်သွား!
5 ။ သင့်ရဲ့ယေဘုယျလူနေမှုပုံစံစတဲ့ Watch
ခလုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခို။ ကျနော်တို့ပြည်တွင်းမှာပြုမူဆက်ဆံနိုင်လျှင်, က ပို. ပင်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းအတွက်ဝက်ခြံဖယ်ရှားပစ်ရန်အခြို့သောအကျင့်ဆိုးတွေကိုဖယ်ရှား ! ဒီထက်အအေးအသား, ဒိန်ခဲတစ်လ, (ကိုကိုးအတွက်မြင့်မားသောမှောင်မိုက်ချောကလက် မှလွဲ. ) လျော့နည်းချောကလက်: တစ်နိမ့်အဆီဓာတ်စာကြိုးစားပါ။
တဦးတည်းဝက်ခြံကိုအဆုံးသတ်လိုပါကစီးကရက်နှင့်အရက်အကြံပြုကြသည်မဟုတ်! လှပသောအသားအရေများအတွက်သေချာပါစေ ဂရုတစိုက်မိတ်ကပ်ကိုဖယ်ရှား (Jojoba ရေနံအလွန်ကောင်းစွာကဒီအလုပ်ကိုမ) သို့မဟုတ် ညစဉ်ညတိုင်းသင်၏မျက်နှာကိုဆေးကြောပါ (ဥပမာအလက်ပိုဆပ်ပြာမှာ) ။ ညဉ့်အဘို့, သင့်အသားအရေရိုးရှင်းတဲ့ hydrolate (ဥပမာပန်းရောင်) လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှူပါစေ